မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ ကျွန်မအသက် ၃၆နှစ်ပါရှင့်။ ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်ရှင့်။ အခုလက်ရှိကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်ပါရှင့်။့့ မှာ ခွဲမွေးမှာပါရှင်။ ကျွန်မမှာ HIV positive CD4 274 ရှိပါတယ်ရှင့်၊ ၂ဝ၁၄ ကစ ART သောက်ပါတယ်ရှင့်။ HIV ရှိတဲ့သူတွေက ဗမာဆေးမတည့်ဘူးလို့ကြားဘူးပါတယ်ရှင့်။ ကလေးမွေးပြီးရင် ဗမာနည်းအရ ဆနွင်းသောက်လို့ ရပါသလားရှင့်။ ကလေးမွေးပြီး အခြားရှောင်ရန်ဆောင်ရန်လေးများသိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာရှင့်။ မေးနည်းပုံမကျရင်လဲနားလည်ပေးပါရှင့်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက်ရော ကူးစက်ရောဂါတွေအတွက်ပါ အရပ်ဆေးနည်းတွေ မလိုအပ်ပါ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ အသက် ၃ဝ ထဲမှာပါ။ သူ့မှာ HIV ရှိနေပြီး ART သောက်နေတာတနှစ်ကျော်ပါပြီဆရာ။ အခု မထင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးငါးလတောင်ရှိနေပြီဆရာ။ ကလေးကို မကူးစက်အောင်လုပ်ဖို့ အချိန်မှီသေးလားဆရာ။ စိတ်ပူလို့ပါ။ အချိန်ရရင်ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
၃။ မင်္ဂလာပါ ဒေါက်တာရှင့်။ ကျွန်မက အသက် (၂၆) နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်မဆီမှာ HIV ပိုးရှိနေပါတယ်။ အမျိုးသားကတော့ နားလည်ပြီးလက်ထပ်ခဲ့တာ အခုဆို (၂) နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်ရှင့်။ ကျွန်မကတော့ အမြဲ CD4 စစ်ပြီး ART ဆေးကိုပုံမှန်သောက်သုံးလာတာလည်း (၂)နှစ်နီးပါးရှိလာပါပြီ။ အမျိုးသားကတော့ ယခုထက်ထိ မရှိသေးပါ။ ကျွန်မက ကလေးလိုချင်နေပါတယ်။ အမျိုးသားကတော့ နောက်မျိူးဆက် ဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ မယူဖို့ပဲပြောပါတယ်။ မိဘတွေကပါ ယူဖို့တိုက်တွန်းတာကြောင့်ရော ကိုယ့်သွေးသားလေး ရှိချင်တာကြောင့်ပါ။ ကလေးယူချင်နေပါတယ်ဒေါက်တာ။ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ အကြံဉာဏ် တောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
၄။ HIV ရှိသော အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သင့်ပါသလား ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါဆရာ။
၅။ HIV ပိုး ရှိနေသူ ယောက်ျားနှင့် ပိုးမရှိသူမိန်းမတို့ အတူနေရာကနေ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရင် ကလေးကိုကူးစက်နိုင်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ ရ/မရ သိချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း HIV ရှိမရှိ စမ်းသပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာစကတည်းက ပိုးရှိနေတာသိရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့ ပိုကောင်းတယ်။ ကလေးကို မကူးစေအောင်ဆောင်ရွက်ဘို့ အချိန်ပိုရလို့ကောင်းတယ်။ သူ့ခင်ပွန်းအတွက်လဲ မကူးအောင် လုပ်ဘို့လိုတယ်။ ပိုးဟာ သွေး၊ ကိုယ်ခန္ဓာကအရည် (ယောက်ျား စီမင်၊ မိန်းမ ဗဂျိုင်းနားအရည်၊ နို့ရည်) တွေနဲ့ ပိုးရှိမိခင်ကနေ မွေးလာမဲ့ကလေးကို ကူးနည်းတွေနဲ့ ကူးစက်တယ်။ လိင်လမ်းကနေကူးတာက အများဆုံးဖြစ်တယ်။
အများဆုံးစမ်းသပ်နည်းဟာ HIV antibody test အင်တီဘော်ဒီ ရှိမရှိ စမ်းနည်းဖြစ်တယ်။ သွေး၊ ဆီး နဲ့ ခံတွင်းက အရည်တွေကို စမ်းတယ်။ ပဌမနည်းနဲ့စမ်းလို့ အပေါင်းပြတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် တခြား အင်တီဘော်ဒီစမ်းနည်းတခု ထပ်လုပ်ရတယ်။ ဒီနည်းကို Confirmatory HIV test သေချာအောင်လုပ်နည်းလို့ခေါ်တယ်။ အဖြေရအောင် ရက်နည်းနည်းတော့ယူရတယ်။ တချို့ ခံတွင်းအရည်စမ်းနည်းကတော့ နာရီပိုင်းသာကြာတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ပိုးတွေ့သူလဲ ကျန်းမာနေအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကလေးကိုမကူးအောင် ဆေးသောက်ရမယ်။ ကလေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နုစဉ်၊ မွေးနေတုံးနဲ့ နို့တိုက်နေစဉ်ကာလတွေမျာ ကူးစက်နိုင်တယ်။ မအေက စားစရာကို ဝါးခွံ့ရာကနေလဲ နည်းနည်းပါးပါးကူးနိုင်သေးတယ်။
ART ဆေးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ အနည်းဆုံး ဆေး ၃ မျိုးရောပေးမယ်။ ကလေးမွေးနေတုံးမှာ AZT (IV) ဆေးထိုးပေးမယ်။ ပြီးတော့ ဆေးဆက်သောက်ရမယ်။ မွေးပြီးရင် AZT ဆေးရည် ၆ လသောက်ရမယ်။ တကယ်လို့ မိခင်က ဆေးသောက်မထားဘဲ မွေးတဲ့ကလေးဆိုရင် AZT အပြင် တခြားဆေးပါ ပေးသင့်တယ်။ ကိုယ်ဝန် မဆောင်ခင်ကတည်းက ဆေးသောက်နေတဲ့မိခင်လောင်းဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ ဆေးပြောင်းရနိုင်တယ်။ တချို့ဆေးတွေက ကလေးအတွက် မသင့်ဘူး။
2. Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) နဲ့
5. Integrase inhibitors ဆေးတွေကို ကိုယ်ဝန်မှာ ပေးသင့်မသင့် သုတေသနမစုံသေးဘူး။
Sustiva ဆေးတမျိုးတည်းကဖြစ်ဖြစ် Atripla ကနေဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ ပဌမ ၃ လ မှာသောက်ရင် ကလေးမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ၃ လနောက်တော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ Protease inhibitors (PIs) ကဆီးချိုနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်။ Viramune ဆေးက အသည်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ CD4 250 cells/mm ထက် များသူတွေကိုသာ သုံးလို့အကျိုးများရင် သုံးရတယ်။
ဘယ်နည်းနဲ့မွေးမွေး မွေးဖွါးခြင်း အန္တရာယ်တော့ရှိတာဘဲ။ ယေဘုယျပြောရရင် ခွဲမွေးတာက ခွဲစိတ်မှု အန္တရာယ်ပါပိုတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ ကြာကြာနေရတာမို့ သွေးကြောပိတ်တဲ့အန္တရာယ် ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ရောဂါပိုးဝင်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
ပိုးရှိတဲ့အမေကနေ ကလေးကိုကူးစက်တာ အမေရိကားနဲ့ ဥရောပမှာ ၂% ထက်နည်းပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက မိခင်လောင်းကနေ ဆေးသောက်နေလို့ အထဲက ကလေးကိုပါကာကွယ်ရာကျတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ မွေးနေတုန်းဆေးသောက်ရင် ပိုနည်းတယ်။
ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း ၆-၁၂ နာရီအတွင်းမှာ AZT ဆေးပေးရမယ်။ ၆ ပတ်ကြာအထိပေးရတယ်။ တချို့ကလေးတွေကို တခြားဆေးလဲတွဲပေးတယ်။ ကလေးတွေကို Virologic HIV tests နည်းနဲ့စစ်တယ်။ အပေါင်းရော အနုတ်ပါ နှစ်ခါပြမှာသာ မရှိဘူး၊ ရှိတယ်ပြောနိုင်တယ်။ ၁၄၂၁ ရက်၊ ၁၂ လ နဲ့ ၄၆ လတွေမှာ စစ်ရတယ်။ အပေါင်းနှစ်ခါတွေ့ရင် ၄၆ ပတ်မှာ ဆေးပေးမယ်။ မသေချာရင် Bactrim ဆေးကိုသတိနဲ့ပေးတယ်။ ပိုးရှိတဲ့ကလေးမှာ Pneumocystis jiroveci pneumonia (PCP) ရောဂါဖြစ်မှာကို အကာကွယ်ပေးတယ်။ ကလေးမွေးပြီးနောက် ပေးနေတဲ့ဆေးကို ပြောင်းသင့်ရင်ပြောင်းပေးမယ်။ CD4 count နဲ့ Viral load တွေကိုကြည့်မယ်။
ကွန်မင့်တခု = အခုတော့ အများစုကို TDF + 3TC + EFV အတွဲကို အသုံးများနေပါဘီ ဆရာ။ WHO ရဲ့ ဂိုက်လိုင်းပါခင်ဗျာ့။